Bartomeu: Koobka Horyaalka Ayaanu Mar Labaad Ku Guulaysanay,19 Dhibcood Ayaanu Madrid Ka Saraynay, Waligoodba Koobka Horyaalka Qiimihiisa Hoos Ha U dhigaan. - Gool24.Net
Madax waynaha kooxda Barcelona ee Josep María Bartomeu ayaa si adag u difaacay qaabka uu u socdo xili ciyareedka kooxdiisu isaga oo dib iskaga weeraray dad uu ku tilmaamay in ay hoos u dhigayaan koobka horyaalka La liga.
Josep María Bartomeu ayaa ku faanay in kooxdiisa Barcelona ay koobka horyaalka La Liga markii labaad oo xidhiidh ah ku guulaysatay iyada oo waliba ay saddex kulan xili ciyaareedka ka hadhsanaayeen.
Waxa kale oo uu Josep María Bartomeu ku faanay in ay 11 dhibcood iyaga oo ka sareeya kooxda kaalinta labaad ay koobka ku guulaysteen halka uu xusuusiyay dadkan in ay 19 dhibcood ay ka sareeyaan halka ay kooxda kaalinta saddexaad ee Real Madrid ay ku dhamaysatay.
Kadib markii ay Barcelona si xun uga hadhay Champions League waxaa eedayn badan loo soo jeediyay maamulka Josep María Bartomeu iyo tababare Ernesto Valverde balse waxa uu Bartomeu u arkaa in xili ciyaareedka kooxdiisu uu guul yahay.
Josep María Bartomeu oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Waxaanu tiro heer sare ah ugu guulaysanay La Liga,iyada oo ah saddex kulan ka hor dhamaadka xili ciyaareedka, anaga oo 11 dhibcood ka sarayna kaalinta labaad isla markaana 19 dhibcood ka sarayna kaalinta saddexaad”.
“Ku Guulaysiga horyaalku waa guul aan caadi ahayn, aan iyaga u ogolaano in ay sheegaan waxa ay doonayaan si ay iskugu dayaan in ay qiimihiisa hoos u dhigaan” ayuu Bartomeu hadalkiisa sii raaciyay.
Josep María Bartomeu oo la hadlayay xubnaha kooxdiisa Barcelona iyo taageerayaasha ugu da’da wayn kooxda ee waqtiga dheer tikidhada kooxda soo haystay ayaa qiray in guruubyada taageerayaasha kooxdiisu ayna qanacsanayn sababtoo ah in ay guulaha la qabsadeen.
Josep María Bartomeu ayaa yidhi: “Qayb wayn oo guruubyada taageerayaasha ahi ma qanacsana sababtoo ah waxaynu aad ula qabsanay guulaha. Waxaynu aad u aaminsanayn ku guulaysiga Champions League,guuldaradii Anfield waxay timid kadib natiijo cajiib ahayd oo guriga ahayd iyada oo ay wali jirtay xusuustii Roma”.
Bartomeu oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Waxaan doonayaa in aan markale sheego sida aan dareemo ee aan ugu hanwaynahay koodan, waxaa waajib inagu ah in aynu u hanwaynaano kooxdeena Barca, ee waxa aynu garoonka ku gaadhayno iyo waxa aynu muujinayno”.